Faaiidooyinka caafimaad ee cambaha iyo waxtarkiisa - Caafimaad tips
Home / Caafimaadka / Videos / Faaiidooyinka caafimaad ee cambaha iyo waxtarkiisa
Faaiidooyinka caafimaad ee cambaha iyo waxtarkiisa
Admin April 16, 2018 Caafimaadka, Videos
Faaiidooyinka caafimaad cambe lafka
Cambe lafka dhadhankiisu aad buu u fiican yahay laakiin waxaad moodaa in dadku aysan caafimaadkiisa warba ka hayn hadaba ogow inuu yahay boqorka khudaarta macaan ee caafimaadkaaga caawinaaya, wali ma is waydiisay sababta daayeerku u jecel yahay maangaha sow taasi maaha inuu ka helo dhadhankiisa macaanka badan.
Faaiidooyinka caafimaad ee cambaha
Cambaha waa mid ka mida khudaarta macaank badan ee Alle ku manaystay dhulkeena hooyo waana khudaar aad meel kasta ka heli karto waxaase faaiidooyinka caafimaad ee cambaha ama maangaha dareemi kara qof u istaagay hagaajinta caafimaadkiisa nololeed.
Wuxuu ka hortagaa kansarka
Cilmi baadhis la sameeyey ayaa muujisay inay cunista cambaha oo aad joogtaysaa ay kaa ilaalinayso ama ka hor tag u tahay cudurka kansarka gaar ahaan midka ku dhaca naasaha kansarka qanjidhka prostrate ka.
Wuxuu hoos u dhigtaa kalastoroolka
Waxyaabaha uu caanka ku yahay cambe lafku waxaa ka mida inu qani ku yahay Vitamin c oo kaa caawinaaya inaad hoos u dhigto heerka kalastroolka sidaas darteed qofka joogteeya cunista cambaha waxaa la ogaaday inaysan is arkin xanuunka kalastroolka.
➤ Akhriso faaiidooyinka cayaarta tenniska
➤ Akhriso faaiidooyinka caafimaad ee malabka
➤ Akhriso Sida ugu fudud ee internetka lacag looga sameeyo
Maqaarka wuu caawiyaa
Joogtaynta iyo cunista cambaha waxay kaa caawin kartaa inaad nadiifiso maqaarkaaga gaar ahaan wuxuu kaa caawinaayaa inaad maqaarka kala dagaalanto finanka iyo wixii la mida, markaad isticmaalayso waad marsan kartaa waana cuni kartaa.
Wuxuu caawiyaa aragtida
Hal koob oo maango ah ama xabad maango ah oo la jarjaray ka dibna la cuno ayaa qofka siisa boqolkiiba 25% vitaminka maalin kasta jidhkaagu u baahan yahay wuxuuna kor u qaada oo wanaajiyaa aragtida indhaha sidoo kalena wuxuuba ka hortagaa araga indhaha oo luma.
Daawo faaiidooyinka cambaha
Dhammaan jidhka oo dhan
Guud ahaan jidhka oo dhan wuu caawiyaa cambe lafku waayo waxaa ku jira vitamins aad u tiro badan waxaana qofka cunaaya lagula taliyaa inuu cuno cambaha oo sidiisa yacni intuu isago soo iibsado diirka ka dhilo ka dibna cuno .
Sidaan hore u soo sheegnayba cambe laf wuxuu qani ku yahay vitamins aad u tiro badan balse markaynu galmada ka hadlayno waxaa kale oo ku badan Vitamin E oo sida lagu ogaaday cilmi baadhisyo tiro badan Vitamin E iyo galmada waxaa ka dhexeeya xidhiidh wanaagsan waa markaynu ka hadlayno galmada caafimaadka leh iyo baahideeda.